omaly aho dia niezaka amin’ny vehivavy izy nanolotra neny lalao sy ny zanany tena faly aho, ahoana ny hevitrao ny vehivavy excites anao ireo lalao. Tena liana ny hahafantatra ny fomba izany Ianao na dia amin’ny Mampiaraka toerana, nanao ahoana ny fivoriana, fa ny sary sy ny tena zava-misy tsy mitovy, ny zava-nitranga tao amin’ny fivoriana, ary ny tena zava-dehibe ny hoe iza izao no fiafarana. tsara, amin’ny Ankapobeny ny hevi -, fotsiny, tsy misy bebe kokoa, Oh, Eny misy ny sasany ara-dalàna hipetraka. Izany dia tsy ny Mampiaraka toerana. Fotsiny haka ny tovovavy ho an’ny TENA ny FIRAISANA ara-nofo avy amin’ny tanàna. Hi rehetra, io maraina io aho dia nitsidika ny hevitra fa ny Mampiaraka toerana ho resy, mamoy fo ny olona, amin’ny fomba rehetra mba hametraka ny fiainany manokana, sns. moa ve ianao mihevitra fa.
Hello momba ny taona izay no nisaraka tamin’ny zatovolahy iray, dia miara-hatramin’ny sekoly ambaratonga faharoa. Ary ankehitriny amin’ny efatra amby roa-polo taona, dia tsy afaka mahita mendrika mpiara-mitory tamiko. Ny zava-misy fa tsy amin’ny ny haavon’ny izy ireo. Mahavita ny ambaratonga faharoa, ny asa, any yoga, milomano, vakio be dia be, amin’ny Ankapobeny fialam-boly fotsiny ny faobe.
Rehetra-karazany ny fotoana ny andro. Mitady tovovavy ny efa-polo taona no ho fahazavana maharitra fifandraisana. Eny, izaho roa-polo, ary izaho virjiny. Iza no miraharaha, manoratra hafatra manokana, dia aza misalasala.
Tiako (ary fantaro) mba hitondra ny ankizivavy, ny vehivavy, ny mpivady mba hitondra ny fahafaham-po feno (mety miverimberina) ny mahay, marefo, maharitra lela.
Rehetra-karazany ny fotoana ny andro, dia nanapa-kevitra ny hanokatra ny kofehy ao amin’ny forum, tena mahaliana be dia be ny mpitsidika avy amin’ny Monaco.
Izy monina ao St
Petersburg, Primorsky distrika. Manambady ary tena te-hahita namana eto amin’ny forum, tena tsara ho an’ny tena ny fizarana sy ny fifandraisana. Mampiaraka toerana ho an’ny fifandraisana misy karazana ho an’ny fifandraisana matotra, vao ny iray amin’ny fotoana fivoriana. Izaho maniry ny hihaona aminao ao an-tanàna, fa atao tsindraindray fivoriana amin’ny raharaham-barotra ny diany. Efa nisy sivana izay afaka mamaritra ny tiana lahy sy ny vavy ny mpiara-miasa, fifandraisana tanjona, taona sy ny tanàna, ka hitady mpiara-miombon’antoka ho an’ny Mampiaraka dia tsy sarotra. Eo ambany ny fikarohana endriky ny Fiarahana posted rohy mankany amin’ny foto-kevitra manokana Niaraka. Raha manonofy hanangana mafy orina eo amin’ny fianakaviana, ary ny mivory ny fanahiny vady, indrindra fa afaka sonia ho an’ny online Dating site. Ao ny tantara fizarana, dia afaka mahita toy ny mpivady maro nihaona eo amin’ny Mampiaraka toerana ary izao no tsy mahagaga izany, satria efa voasoratra mihoatra ny iray tapitrisa ny mpampiasa izay liana amin’ny fifandraisana matotra
← Ny lahatsary amin'ny chat tsy voafetra ho maimaim-poana
Izay mba nahalala tsara ny olona ho amin'ny fiainana →